कस्तो ढाँटेको ? सरकार !
डा. गाेपाल ठाकुर बिहीबार, चैत २७, २०७६ मा प्रकाशित
गएको हप्ताको कुरो हो । मलाई मेरै छिमेकी गाउँपालिका आदर्श कोतवालका कॉमरेड दिनेश पटेलले फोन गर्नु भयो । त्यस नगरपालिकाका उहाँको छोरो समेत केही युवाहरू तनहुँको दमौलीमा मजदूरी गर्दा रहेछन् । देशै लॉकडाउनमा गए पछि उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न/खान गाह्रो भयो । सरकारी निकायबाट अनुमती लिएर एउटा गाडी भाडामा लिई घर फर्कंदै रहेछन् । लोथरमा सुरक्षाकर्मीले गाडी रोके । तनहुँको पासलाई वास्ता गरेनन् । पछि मैले के भएको होला भनेर बुझ्ने प्रयत्नथ गर्दै थिएँ । केही घणटा पछि थाहा पाएँ, गाडीलाई पुनः दमौली नै फर्काइयो भनेर ।
आइतबार फेरि एउटा अर्को फोन आयो । मेरै नगरपालिकाका एकजना मजदूर कॉमरेड नबीजानको फोन थियो । उहाँ आफैँ गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (मा. के.) बाट वडा सदस्य उठ्नु भएको थियो । पछि केही समय देखि ललितपुरको बालकुमारीमा एउटा उद्योगमा गाउँकै पाँचजना एकै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । लॉकडाउन दोस्रो हप्ता लम्बिए पछि भारतीय उद्योग मालिक उद्योग बन्द गरेर घर गए । बिचरा नबीजानहरूले कुनै मेसो नै पाएनन् कता जाने ? कता बस्ने ? ललितपुरकै चुनीखेल पुगेका रहेछन् । उहाँको अति सामान्य सरोकार थियो । कुनै सवारी साधनमा घर फर्कन अनुमती पाए हुने । पछि मेरै नगरपालिकाका मेयरले त्यस्तो अनुमती पनि पठाउनु भयो रे । तर यहाँबाट न कसैले अनुमती दिने न त कुनै सुरक्षाकर्मीले सिम्रौनगढ नगरपालिकाको अनुमतीलाई मान्ने स्थिति रह्यो । त्यसैले घर फर्कने त कुरै भएन ।
उहाँहरूको दोस्रो सरोकार थियो कुनै पनि सरकारको कुनै निकायले उहाँहरूलाई बस्न/खान व्यवस्था मिलाउने । उहाँहरू त्यसको लागि पनि पहिले बालकुमारीमा वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय धाउनु भयो, केही भएन । पछि चुनीखेल पुगेर पनि कोशिस गर्नु भयो, केही भएन । कुनै तरकारी बोक्ने् गाडी फिर्दा त्यसमा जाँदा पनि कता ओराल्दिने हो, ठेगानै भएन । अन्तमा हायलकायल भएर सोमवार बिहानै पैदलै हिँड्नुभयो उहाँहरू सिम्रौनगढको लागि ।
यता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु किन्ने कुरो गरौँ । छिमेकमा भएको वाणस्थली चेकपोष्टको पीपलबोट नेर केही पसलहरू खुलेका देखिन्छन् । एक दिन बिहानै तिनै मध्येको एउटा पसलमा पुगेँ । उच्च रक्तचाप, मुटुरोग र मधुमेहको रोगी भएकोले मैले करेला खाइरहनु पर्दछ समय-समयमा । त्यस पसलमा सोधेँ, पाऊको ७० रुपैयाँ अर्थात ३५० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम । पछि थाहा पाएँ राति दुई बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म कालीमाटीको थोक तरकारी बजार खुल्छ भनेर । त्यसै रात त्यहाँ गएँ । त्यही करेला ७०० रुपैयाँ प्रति ढक पाइयो । हाम्रो छिमेकी पसलमा १,७५० रुपैयाँ प्रति ढकको मुल्य बिहान सुनेको थिएँ ।
तर यी घटनाहरूभन्दा पनि कुनै किसिमले क्षतिपूर्ति नहुने एउटा यस्तो घटना पनि घट्यो । मेरी सलहज गर्भवती थिई । थापाथलीको प्रसुती गृहमा नियमित जाँच चलिरहेको थियो । सुत्केरी हुने अन्दाजी समयभन्दा एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर व्यथा लाग्दैनथ्यो । तर अस्पतालमा फोन गर्दा पेट नदुख्दासम्म नआउनु भन्ने जवाफ पटक-पटक दोहोरियो । अस्पतालको फोन उठाउने कर्मचारीको भनाइ हुन्थ्यो इमर्जेन्सी बाहेक कुनै पनि ओपीडी खुला छैन । पछि कीर्तिपुर अस्पताल गएर जचाउँदा त गर्भाशयमा पानी छैन, तुरुन्त शल्यक्रिया गर्ने अवस्था आयो । शल्यक्रिया भयो । तर शिशु बाँचेन । धन्न आमा चाहीं बाँची ।
त्यसपछि चीनबाट आएको समाग्रीबारे के चर्चा गर्ने रु कति किफायत वा कति महङ्गो परे ती सामग्रीहरू त्यो त छानवीनको विषय होला । यदि भ्रष्टाचारै भएको रहेछ भने पनि कानुनले कसैलाई छूट दिएको छैन, आशा गरौं भोलि पनि नदेला भनेर । तर सबैभन्दा नरमाइलो सूचना त के हो भने आएका सामानहरू गुणस्तरीय छैनन् । यसको लागि को जिम्मेवार हुने ?
त्यसै गरी राहत वितरणको जहाँसम्म कुरो छ, त्यसलाई फोटो शेसन भन्दा हुन्छ । एकजना लिने, दसजना बाँड्ने । लिने निरीह जस्तो चिन्ताग्रस्त र बाँड्नेहरू दाँत देखाउँदै ङिच्च हाँसेका फोटाहरू दिनहुँ सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् । यस्तो जगहँसाइको जिम्मा कसले लिने ?
अहिले आएर सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने कुरो गरेको छ जसको व्यापक विरोध पनि हुँदैछ । के स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई हतोत्साहित गरेर यो कोरोना भाइरस रोग (कोभारो-७६) लाई जित्नु सकिन्छ रु के यही हो कम्युनिष्ट सरकारको विचार र व्यवहार ? यही हो मानवीय संवेदनशीलता ? मेरा गुरु जनकवि हरिहर यादवले ‘पंचायत व्यवस्थाको तमाम पूर्जा लुटेरा’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । के अहिलेका तीनै तहका सरकारहरूको पनि भएभरको बलबुत्ता उतै त डोरिएको होइन ? होइन भने अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारहरूले एकाध अपवाद बाहेक कुनै राम्रो काम गरेको उदाहरण किन भेटिँदैन । भेटिन्छ भने लॉकडाउनले अलपत्र परी देशबाहिर वा देशभित्रैबाट आफ्नो स्थायी ठेगानामा जानखोज्नेहरूको क्रन्दन, सुनिन्छ भने कोरोनाको नाममा अन्य बिरामीहरूलाई अस्पतालले उपचार नगरी तिनीहरूमध्ये कैयौंको मृत्युको दारुण खबर, भोगिन्छ भने दैनिक उपभोग्यवस्तुहरूको चरम महङ्गी र कालाबजारी, देख्न पाइन्छ भने राहतको नाममा फोटो शेसनका टीठलाग्दा तस्वीरहरू ।
आजै सरकारले भोली र पर्सि लक डाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुालाई बाहिर जान छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यो आलेख पुरा नहुँदै त्यो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । घटनाक्रमहरुले आशंका जन्माएको छ के एकजना हाम्रा प्रधानमन्त्री बिरामी भएसँगै देशै विरामी त भएको होइन ?